Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks
Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 30/04/2021)
A quintessential Travel lavitra ny handeha ho any Europe lamasinina. Efa lasa haingana ny tiany Eco-namana mandeha fomba. Travel, amin'ny ankapobeny, tsy Mampivelatra ny faravodilanitra fa Mampivelatra ny fomba fijery. Eritrereto ny St. Ny tsy laitra Augustin teny, "Ny izao tontolo izao dia boky sy ireo izay tsy Travel, mamaky pejy iray monja ".
Ao amin'io mpahay teknolojia, digital age connection is fast and furious. Noho ny soa rehetra, dia very fifandraisana amin'ny ampahany manan-danja indrindra dia lavitra sy ny fiainana, 'izao fotoana. Train nivezivezy amin'ny alalan'ny aingam-panahy Eoropa, ny aina sy ny tantaram-pitiavana.
Ho antsika izay tsy miaina ao amin'ny firenena izay mandeha lamasinina no malaza, dia afaka ny ho saro-pantarina traikefa nahafinaritra. Lehibe iray hafa Perk ny Eoropeanina fiarandalamby mandeha dia, Tsy toy ny seranam-piaramanidina, Eoropa gara dia hita mahitsy eo afovoan'ny tanàna. Ny vola lany ilaina tapahiny ny hotetehina miala Travel teti-bola.
Raha manao safidy iray amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby Eoropa, isika misafidy ny fomba mandeha izay tsy anjara antsika ihany, fa mamela antsika hahita mihoatra lavitra noho izahay te matetika. Iray toy izany manokatra ny tambazotra lehibe roa ambin'ny folo Eoropa zava-nisongadina, ary atao ao amin'ny momba ny 3 herinandro. Vakio eo mba hahitana ny fomba mandeha Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks.
Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train Day 1: Vienna, Aotrisy
Ny fiaran-dalamby ny lalana amin'ny alalan'ny Eoropa manomboka ao Vienna, renivohitr'i Aotrisy. Roa andro traikefa nahafinaritra be voninahitra eo am-piandrasana. Santionan'izany fiangaly streetscapes sy ny amperora lapa no manomana ny mpamaky ho fisehosehoana kanto, an'ireo trano, ara-kolontsaina, ary sangan'asa mozika. Izany no miaraka ny kafe-trano dia nialona ny kolontsaina sy mihetsiketsika famolavolana sary.
mumok dia tsy maintsy-rehefa in Vienna. Tsy fantatra noho ny Avant tena manavao ary indraindray mahatsiravina zavaboary kanto, izay ahitana asa nataon'i Pablo Picasso sy Andy Warhol. Ny famoriam-bola manontolo dia ahitana ny efa ho 10,000 kanto mahafinaritra.
Day 2: Salzburg, Aotrisy
Ny lamasinina amin'ny alalan'ny Eoropa mitohy, mandany ny indray andro eo ny Salzburg Aotrisy tanàna. Izany dia teo amin'ny sisin-tanin'i Alemaina ary manana mahatalanjona hevitra ny Eastern Alpes. Salzburg ny milaza ny lazan'i dia maha-tantara-boky tanàna indray mandeha an-trano izay ho an'ny lehibe indrindra manerana izao tontolo izao mpamoron-kira, Mozart.
Ny havoana dia velona amin'ny Salzburg. Tsy indray mandeha no ampiasaina ho filming toerana ho an'ny tena Nahazo teny fiderana, “Feon'ny mozika” ary misy ny fahatsapana ny famoronana zavakanto. Koa exudes mangina fahatoniana.
Eoropa Zava-nisongadina andro 3: Munich, Alemaina
Roa manaraka fiatoana amin'ny lamasinina amin'ny alalan'ny Eoropa no Munich sy Stuttgart any Alemaina. Ho tsara ny mandany andro tsirairay ireo toerana malaza.
Munich sy ny vakoka Bavarianany dia toerana nananganana ampahany lehibe amin'ny kolontsain'izy ireo ny labiera sy ny fomban-drazana labiera, fa efa ho fito taonjato. Ny Oktoberfest eo an-tampon'ny lisitra ao Munich. Izany dia ankalazaina ny olona an-tapitrisany izay fitsidihana manerana izao tontolo izao, handray ao amin'ny fankalazàna.
Dusseldorf ho any Munich Lamasinina
Dresden ho any Munich Lamasinina
Nuremberg any Munich Lamasinina
Bonn any Munich Lamasinina
Day 4: Stuttgart, Alemaina
Stuttgart manana mihevitra kanto, izay fifadian-kanina sy ny fiara raitra trano fisakafoanana mamorona ny Ambiance ny fiainana ankehitriny, nefa misy zavatra hafa ny Stuttgart noho ny ankehitriny. Stuttgart manana Tranombahiny divay sy ny vata-bazana shaded labiera saha izay mampiseho ny nametraka-miverina, mandaka ny tongotrareo ambony.
Nuremberg ho Stuttgart Lamasinina
Munich ny Stuttgart Lamasinina
Frankfurt ny Stuttgart
Heidelberg ny Stuttgart Lamasinina
Eoropa Zava-nisongadina andro 5: Strasbourg, Frantsa
Hopping indray ny fiaran-dalamby, fa ho any Frantsa! Mandania ny indray andro eo Strasbourg.
Strasbourg mampifandanja fahiny eo amin'ny lasa sy ny ho avy miandalana. Ny Gothic Cathedral dia an'ireo trano mahagaga and roaming through the old town’s twisting alleys and enjoying tavern food comes highly recommended.
Paris ho any Strasbourg Lamasinina
Luxembourg ho any Strasbourg Lamasinina
Nancy ho any Strasbourg Lamasinina
Dijon any Strasbourg Lamasinina
andro 6 – 8: Paris, Frantsa
Paris kely mila teny fampidirana sy ny malaza maritrano ao anatin'izany ny Tour Eiffel, ny Arc de Triomphe, ary ny Notre Dame Cathedral. Ny teny Paris izay ahitana fitambaran dia mitovy dika amin'ny fomba ary marina izany. manantena izao tontolo izao-kilasy nahandro, fiantsenana, ary ny lalan-tsara izay tsy misy fiafarana ny loharanom-fitaomam-panahy sy ny fahasambarana. Ny tsara indrindra tany Eoropa fitsangatsanganana lamasinina foana ahitana ity tanàna malaza.
Eoropa Zava-nisongadina andro 9 & 10: Brussels, Belzika
Rehefa Paris dia wooed amin'ny olon-tiany, mandany ny roa andro ao Brussels, alohan'ny fiaran-dalamby manaraka tongotra. Roa andro in Brussels dia ahitana ny zavakanto deco facades ary nitsidika ny Grand Palace kianja. Izany dia midika hoe miorina ao am-pon'ny an-tanàna, aiza ny 17faha tamin'ny taonjato lasa avy amin'ny fiainana.
andro 11 – 13: Amsterdam, The Netherlands
Amsterdam no toerana manan-tantara ny Cruise miaraka lakandrano, izay mahazatra, ary nitsangantsangana amin'ny alalan'ny tranom-bakoka sy ny boaloboka feno toeram-pivarotana. misotro, fisakafoana, ary ny seho famolavolana dia manintona sy mampiala voly. Amsterdam dia tanànan'ny gaga, ary dia an-trano ny Van Gogh tranom-bakoka ary koa ny hafa maro be harena amin'ny miseho.
Eoropa Zava-nisongadina andro 14 – 17: Bremen & Berlin, Alemaina
Head miverina any Alemaina sy handany dimy andro amin'ny lamasinina amin'ny alalan'ny Eoropa in Bremen, Berlin, ary Dresden. Indray andro for Bremen (amin'ny sary eto ambany), mitsidika ny tranom-bakoka sy ny lalan-tsara maro toy ny Bremen Overseas Museum. Tena tanàna seranan-tsambo, Bremerhaven no toerana vaovao mba hankafy hazan-dranomasina, ary mianatra momba ny tantara mahavariana seranana.
Berlin dia mila ny telo andro asitrika. Berlin dia manana laza noho izy “tanàna tsy matory mihitsy”. Raiso manararaotra ny fahavitrihan'ny! Alina sy ny korana anaranam-po dia ho an'ny andro dia ho an'ny ara-kolontsaina mikatsaka.
Day 18: Dresden, Alemaina
Dresden mila andro iray ihany, mahagaga ho toy ny Grand Dome sy ny Versailles-ara-tsindrimandry Zwinger lapa trano tranombakoka. Ilay tanàna dia naorina teo an 1743 ary maintsy indray taorian'ny Ady Lehibe 2. Misy anaram-bosotra 'Florence ny Elbe’ noho ny idyllic toerana.
Hanover ho Dresden Lamasinina
Potsdam ho Dresden Lamasinina
Nuremberg ho Dresden Lamasinina
Eoropa Zava-nisongadina andro 19 – 21: Prague, Repoblika Tcheky
Ny lamasinina diany tany Eoropa dia mifarana any Prague, araka ny tafio-drivotra ny zava-mahagaga. Prague dia ny tanàna sy ny tilikambo Matetika no ampitahaina ny hatsaran-tarehin'ny Paris. Izany dia midika hoe koa dia nofaritana ho toy ny an-trano ny tsara indrindra ny Eoropa labiera. Ankafizo ny fampisehoana iray 14faha vato taonjato tetezana, lapa ambony tampon'ny havoana, ary renirano kamo. Izany no tonga lafatra fomba hifarana ny lamasinina lalana amin'ny alalan'ny Eoropa.
Ny tsara indrindra tany Eoropa lamasinina fitsangatsanganana hanao antoka fa mahazo aina ary nitsahatra. Ankasitraho ny toerana manodidina teny an-dalana, ny fiarovana ny dia amin'ny lamasinina, ary manery amin'ny toerana maro araka izay azo atao. Tsy misy fomba tsara kokoa mba handeha. boky Save A Train amin'izao fotoana izao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / tr ny / de na / en sy ny maro hafa fiteny.
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
Aiza no Mankalaza ny Porima Tamin'ny volana Martsa
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Malaza Fiangonana Sy Ny Trano Fitokana-Monina Any Eoropa